TOP NEWS: Akhriso Warmurtiyeed ay soo saareen Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta Gobolka Hiiraan oo Kulan Xasaasi ah ka yeeshay Shirka Maamul u Sameynta labada Gobol+Sawiro – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Akhriso Warmurtiyeed ay soo saareen Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta Gobolka Hiiraan oo Kulan Xasaasi ah ka yeeshay Shirka Maamul u Sameynta labada Gobol+Sawiro
by admin 5th May 2016 160
Kulanka waxaa ka qeyb galay Siyaasiyiin Hore Wasiirro uga soo noqday dowladihii KMG ahaa ee dalka, Odayaal Dhaqameed, aqoonyahanno iyo qeybaha Bulshada oo ka soo jeeda Gobolka Hiiraan waxaana lagu taagarayay Sida uu u socda Shirka Maamul u sammeynta Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe,
Kulanaka intii socda waxa lagu Bogaadiyaya Dowladda Dhexe iyo Duubabka Dhaqanka Sida dagganaanta iyo isu tanaasulku ku jiro oo ay shirka u wadaan.
Nabaddoon Maxamuud Xasan Xalane, Caaqil Qaalid Cabdi iyo Siyaasi Cabdriraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xildhibaan iyo wasiirba ka soo noqday dowladahi ku meel gaarka ahaa waxa ay si wadajir ah u sheegay in dhawaan la soo gabagabaynayo Wajiga labaad ee shirka.
Siyaasiyiinta iyo Waxgaradka ayaa intaa ku daray in Beelaha Labada Gobol ay u dhan yihiin shirka oo aanay jirin Beel ka maqan, waxaana Been Abuur ay ku tilmaameen Siyaasiyiinta ka soo horjeedda dhismaha Maamulka Hiiraan yo Shabeelaha-dhexe oo ku aaddan Habsami u socodka Shirka, Beesha caalamka ha kordhiso taageerada shirka.
Qeybaha ka qeybgalay shirka ayaa war-murtiyeed ka soo saaray gabagabadii shirka, wuxuuna u qornaa sidan:-
Ku: Dowladda Federaalka Soomaaliya, Beesha Caalamka, Bulshadda Soomaaliyeed iyo Shacabka ka soo jeeda Gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha-Dhexe.
Ka: Ergada Xawaadle ee Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha-dhexe.
Ujeedo Warsaxaafadeed Taageerada Shirka Maamul u sameynta.
1- Shirka Maamul u sammeynta, waxa uu soo maray Marxalado kala Duwan waxaana Maalmaha soo socda uu u gudbaya wajiga sedexaad oo lagu xulayo ergada ansixinaysa Dastuurka Dowlad Goboleedka.
2- Waxaan jirin wax cabaqabad ah oo ka dhex taagan ama Heesta Beeshan iyo Beelaha Ka soo jeeda Gobolka Hiiraan sidaas darteed waxaan ka digaynaa in shirka ay carqaladeeyaan oo tash-wiish ku furaan Shaqsiyaad dano gaar ah leh, sidookale isku dayaya inay jahawareeriyaan Shacab weynaha ka soo jeeda Gobolka Hiiraan .
3- Waxaan Gacma Furan ku soo dhaweenaynaa cid kasta oo wanaag ku soo kordhinaysa Maamul u sammeynta waxaana ka soo horjeedna cidkasto oo ujeedkeedu tahay inay Fashiliyaan Shirka Dhismaha Dowlad Goboleedka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
4- Ugu dambeyn waxaa u mahad Celinaynaa Duubabka Dhaqanka iyo Wakiilada Beelaha sida ay ugu dadaalayaan u gudbidda shirka ee wajiga sedexaa
5- Waxaa kale oo aan u Mahad celinaynaa Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Federaal Sida ay u maareeneyyso Shirka Maamul u sammeynta.
TOP NEWS: Shirka Gollaha Wasiirada oo Maanta aad Xasaasi u ahaa iyo Qodobo Muhiim ah oo laga dooday
TOP NEWS: Daawo Wasiiro ka Tirsan Xukuumadda Soomaaliya oo ka qeyb galay Dood ay soo qaban qaabisay wasaarada Dhalinyarada iyo Isboortiga kaasi oo looga hadlaayay sidii…
Dalka Kenya oo laga heley Qof uu Asiibay Cudurka Ebola.
Akhriso: Dowladda oo ka hadashay Xariga Abuu Mansuur Sharuudo adagna hordhigtay
admin 13th December 2018 13th December 2018
Xarakada Alshabaab oo sheegatey Masuuliyadda Weerarkii Cadaado
admin 18th June 2015 27th August 2015